: at 10/06/2009 05:00:00 PM
ကင်ဆာရောဂါ လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကြားလိုက်ရတဲ့ လူတိုင်း ထိတ်လန့် သွားတတ်ကြတယ် ။ ဒီရောဂါ နာမယ် အတပ်ခံလိုက်ရတဲ့ လူနာ နဲ့ သူ့ ရဲ့နီးစပ်ရာ အရင်းနှီးဆုံး သူများ အားလုံး လိုလို စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ ဖြစ်ကြရတယ် ။ ကာယကံရှင် လူနာ အဖို့ မှာ တော့ ဆိုဘွယ်မရှိတော့ပါဘူး ။ သိသိ ချင်း စိတ်မထိန်း နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ရသူများ ထုနဲ့ဒေးပါဘဲ ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ဓါတ် ဘယ်လောက်ခိုင်မာတယ် ပြောပြော ရုတ်တရက်အချိန် အခိုက်အတန့် လေးမှာ စိုးရွံ့ သွားမိမှာပါ ။ ပြီးတော့မှသာ စိတ်ထိန်းနိုင်သူတွေ အဖို့စိတ်အေးအေးထားပြီး ဒီရောဂါကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ဖို့ ၊ ရှေ့ ဆက် ပြီး ကျန်နေတဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်လေးတွေ ကို ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခဲ့ နိုင်မှာပါ ။ ဒီကင်ဆာရောဂါဆိုတာ တကယ်ဆိုတော့လည်း ကုသရ မလွယ်ကူတဲ့ ကြောက်စရာ ရောဂါတမျိုးပေါ့။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူ့ ကို နောက်ကျမှ သိကြတာတွေ များလို့ ။ရောဂါ နာမယ်တပ် အဖြေထွက်လာကြတဲ့ အချိန်ဆိုရင် ရောဂါ ကျွမ်းနေကြတာ များပါတယ် ။စောစောစီးစီး သိနိုင်ကြရင်တော့ တချို့ ကင်ဆာရောဂါများဟာ လုံးဝ ပျောက်ကင်း နိုင်ကြပါတယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ပို၍ကောင်းပါသည် လို့ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား ။
ဒီတော့လည်း ရောဂါတခု ကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အတွက် ဘယ်ရောဂါ ဟာ ဘယ်လိုလူတွေမှာ အဖြစ်များ တတ်ကြသလည်း၊ဘယ်လို နဲ့ ဘာကြောင့်ဖြစ်တတ်တာလည်း၊ ဘယ်အရွယ် မျိုးမှာ အဖြစ်များတတ်ကြသလည်း ၊ ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင် သလည်းဆိုတာတွေ သိရင် နဲနဲ ပါးပါးတော့ အထောက်အကူ ပြုနိူင်မယ် လို့ ထင်ပါတယ် ။
အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ကင်ဆာ ၂ မျိုး မှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနဲ့ရင်သားကင်ဆာ တို့ပါ။ အခု သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျဉ်းချုပ်လေး ပြောချင်ပါတယ် ။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနှုန်းမှာ တကမ္ဘာလုံး အနေနဲ့ ကြည့်ရင် တနှစ်အတွက်ရောဂါသစ်ဖြစ်သူ အနေနဲ့ အမျိုးသမီး ၅ သိန်း မျှ ရှိပြီး သေဆုံးမှုမှာ တနှစ်လျှင် ၂သိန်း၈သောင်းခန့် ရှိနေတဲ့အတွက် ခု ခေတ်စားနေတဲ့ဝက်တုပ်ကွေး (swine flu) ထက် အဆ ပေါင်း သောင်းချီ ဆိုးဝါးလှပါတယ် ။ ဆေးပညာ ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်း တွေ နဲ့အသေးစိတ် တွေ သိပ်များရင် ရှုပ်ထွေးနေမှာစိုးလို့လိုအပ်တာလေးတွေဘဲ အနည်းငယ်ပြောပါမယ် ။
သားအိမ် ၊သားအိမ်ခေါင်း ၊ယောနိ နှင့် သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ပုံများ
( TNM နည်းနဲ့ ရောဂါအဆင့်ခွဲခြားထားခြင်း ထဲမှ I , II အထိသာ ပြထားတာပါ )
International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)မှ TNM( Tumor , LymphNode , Metastasis ) နည်းနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရောဂါ အဆင့် များ အသေးစိတ် ကို ဒီနေရာလေး မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။ အကြမ်းအားဖြင့် Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) အဆင့် ကို TNM Grade0,I A/B, IIA/B, III A/B ,IV A/Bဆိုပြီး ခွဲခြားထားပါတယ်
ရောဂါ လက္ခဏာ များ မှာတော့ စစချင်းဆို ဘာမှ လက္ခဏာ ပြလေ့မရှိပါ ။
နောက်အတန်ငယ်ကြီးထွားလာမှ ပုံမမှန် ရာသီ သွေးဆင်းခြင်း၊ မီးယပ်သွေးဆုံးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သွေးထပ်ဆင်းခြင်း (Post Menopausal Bleeding)။ အနံ့ အသက်မကောင်းတဲ့အညောင်းဆင်းခြင်း ။ ခါးနာခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း ၊နဲ့တခြားကင်ဆာတွေလို ပိန်ချုံး ။ ချိနဲ့၊ အစားအသောက်ပျက် ။သွေးအားနဲပြီ မောခြင်း ။ ခြေထောက်ဖေါယောင် ၊ အရိုး နာကျင်ကိုက်ခဲ ။စတာတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်စောစောစီးစီးသိဖို့ ရာကို သားအိမ်ခေါင်းဝမှ အမြှေးပါးအနဲငယ်ကို ယူပြီး H&E stain ဆေးတမျိုးနဲ့ အရောင်တင်ကာ အဏုကြည့် မှန်ဘီလူးအောက်မှာ စစ်ဆေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒါကို Papanicolaou test, or Pap smear for cervical cancer screening လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ Conization လို့ ခေါ်တဲ့ ကတော့ပုံ အသားစအနည်းငယ်ဖြတ်ယူပြီး biopsy စစ်ဆေးကြည့်လို့ လဲရပါတယ် ။အဲဒါ က ပုံမမှန်သံသယဖြစ်စရာ နေရာလေးမှာ cold knife သုံးပြီး loop excision အနေနဲ့ဖြတ်ယူတာဖြစ်လို့ကုသမှု အနေနဲ့ပြောလို့လည်း ရပါတယ်
ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းများ အထဲမှာ ..
၉၉% သော သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဟာ Human Papilloma Virus (HPV) လို့ ခေါ်တဲ့ဗိုင်းရပ်ပိုးတမျိုးကြောင့် ဖြစ်ရတယ် ။သူဟာ အမျိ်ုးသမီးတွေ အတွက် သားအိမ်ခေါင်း အပြင် ဆက်စပ်နေတဲ့လိင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်း ၊ စအို နဲ့ခံတွင်း တွေမှာပါ ကင်ဆာ ဖြစ်စေတတ်တယ်။အမျိုးသားတွေမှာလည်း လိင်တံ နဲ့စအိုတို့ မှာ ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိူင်ပါတယ်။ ဒီပိုးဟာ လိင်အင်္ဂါ တွေ နဲ့စအို မှာ ကြွက်နို့ပုံသဏ္ဍန်(Ano-genital warts )၊ ပါးစပ်မှာ oral papilloma ခေါ်တဲ့အနာပေါက်ခြင်း တွေလည်း ဖြစ်စေတတ်ပါတယ် ။
ဒီဗိုင်းရပ်စ် ပိုးရဲ့ဖွဲ့ စည်းပုံ ။ အသက်အရွယ်အလိုက် ၊ နိူင်ငံအလိုက် ဖြစ်ပွားနှုန်း စတဲ့ ဂရပ် ပုံ အသေးစိတ်တွေ ကိုတော့ ဒီမှာ မရေးပြတော့ပါဘူး ။ စိတ်ဝင်စားလို့ သိချင်ရင် ဒီနေရာ မှာ ဆက်ဖတ်လို့ရပါတယ် ။
ရောဂါ ဖြစ်စေရန် ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အကြောင်း (Cofactors) များမှာ -
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ၊ HIV ပိုး ရှိနေခြင်း ၊ တခြား လိင်ကြောင့် ကူးစက်ရောဂါတမျိုး Chlamydia infection စသည်တို့ ရှိနေခြင်း ၊ အဟာရချို့ တဲ့ုခြင်း ၊ ဟော်မုန်းပါသော တားဆေးများ ကြာရှည်စားသုံးခြင်း ၊ ကလေး ဦးရေ များစွာမွေးခြင်း ။ လိင်ဆက်ဆံ ဖေါ်များပြားခြင်း ၊ မျိုးရိုးထဲတွင် အလားတူ ရောဂါ ရှိုခြင်း စတဲ့ အချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ HPV ပိုး မှာ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ရှိတဲ့ အထဲမှာ ၁၅ မျိုးခန့် က ကင်ဆာ ဖြစ်စေတတ်ပြီး ၊ HPV 16 & 18 တို့ ဟာ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာရဲ့၇၀ % ရဲ့ အဓိက တရားခံဖြစ်ပါတယ်။ ခုဆိုရင် အဲဒီ HPV ပိုးကို သေစေနိုင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတမျိုး ပေါ်ပေါက်လာပါပြီ ။ Cervarix နဲ့Gardasil ဆို ပြီး ဆေး ၂ မျိုး ထွက်ရှိ နေပါပြီ။
ဒီဆေးကို အမျိုးသမီး ငယ်ရွယ်သူတွေမှာ ( အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၂၆ နှစ် အတွင်း ထိုး ပါက ၁၀၀ % အထိ ကာကွယ်မှု ပေးနိုင်စွမ်း ရှိတယ် လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒီဆေး ကို ၆ လတာ ကာလ အတွင်း ၃ ကြိမ် ထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ 0-2-6 ဆိုပြီး ပထမ တကြိမ်ကို0လ ၊ ဒုတိယ တကြိမ်ကို2လ ၊ တတိယ တကြိမ်ကို6လ မြောက် မှာ ထိုးရပါတယ် ။ နောက်ပြီး အသက် ၂၇ နှစ်မှ ၄၅ နှစ် အရွယ် အတွက် အလားတူ ကာကွယ်ဆေး လည်းရှိပါတယ် ။အဲဒီအတွက် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းဘယ်လောက်ရာနှုန်း အတိအကျ ဆိုတာတော့ သေချာ မသိသေးပါ ။
ဒီကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးတဲ့ သူတချို့ တလေ မှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့ အန်လိုခြင်း၊ မူးမော်ခြင်း ၊ ကြွက်သား များ ကိုက်ခဲခြင်း ၊ အရေပြားမှာအနီကွက် များ ထွက်ပေါ်ခြင်း စတဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ် နိုင်ပါတယ် ။ ဒါတွေက ဘယ် ကာကွယ်ဆေးတွေမှာ မဆို ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ တွေ ပါဘဲ။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စပြီး ဗြိတိန် နှင့် အမေရိကန် တို့ မှာ အမျိုးသမီးများ ကာကွယ်ဆေးထိုး ခဲ့ကြတာ ၂၀၀၉ ခု စက်တင်ဘာလ ထိ ဆို ၁.၄ သန်း နှင့် ၂၅ သန်း အသီးသီး ရှိပြီးကြပါပြီ။
အခုဆိုရင် ထိုင်ဝမ်နိူင်ငံမှာလည်း HPV ပိုးအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့ကျန်းမာရေးဌာနမှ ပညာပေးလှုံ့ ဆော်မှုများ လုပ်နေကြပါပြီ ။ မနှစ်က စပြီး အဲဒီထိုးဆေးကို စတင် အသုံးပြု နေကြပါပြီ ။ ဒါပေမဲ့ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အနေနဲ့ တော့ အခမဲ့ ထိုး မပေးနိုင်သေးတဲ့ အတွက် မိမိဖာသာ ငွေအကုန်ကျခံပြီး ထိုးကြဆဲ ကာလ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆေးတလုံး ကို NT$ 3500(US$ 109 မျှ) ကျ ပါတယ် ၊ ၃ လုံးထိုးရ မှာ ဖြစ်လို့၁၀၅၀၀ ပေါ့ ( US1$=NTD 32 ခန့်ပါ) ခုဆိုရင်တော့ ကုပ္မဏီဈေး နဲ့ဆေးဖက်ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် တလုံးကို 2500 သာ ပေးရပါတယ် ။ နောင် နှစ် အနည်းငယ် အတွင်း ဒီဆေးကို အများအတွက် အစိုးရ က အခမဲ့ ဝန်ဆောင်ပေးဖို့အလားအလာရှိ ပါတယ်။
ဒီကာကွယ်ဆေးဟာ HPV ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာထဲ မှုာ ခုခံနိုင်စွမ်း Antibody ကို ပေါ်ထွက်စေတာ မို့ အမျိုးသားများ မှာလည်း ထိုးလို့ရပါတယ် ။ ကိုယ်တိုင် အတွက်ရော ။အိမ်သူ မဟေသီ အတွက်ပါ အကျိုး မယုတ်စေပါဘူး ။
အကောင်း နဲ့အဆိုး ဆိုတာ အမြဲဒွန်တွဲနေတတ်ကြပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တပါတ်က ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ Natalie Morton ဆိုသူ ၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တဦးဟာ ကျောင်းမှာ ဒီ Cervarix ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီး သိပ်မကြာမီမှာပဲ ရှော့ခ် ရသွား တာ ၊ နောက်တော့ အသက်ပါသေဆုံး သွားတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးဌာန တွေမှ စစ်ဆေး ဆဲ ရှိနေပါတယ် ။ လောလောဆယ်မှာ တွေ့ ရှိချက်ကတော့ သူမ မှာ ရင်ခေါင်း နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကင်ဆာ .. အဆုပ် နဲ့နှလုံးထဲ မှာ ဖြစ်နေတာ ကို စစ်ဆေး တွေ့ ရှိပါတယ် တဲ့။ ပြသနာ တွေ ကတော့ ဘယ်ထိ ဆက်အုံးမယ် မပြောနိုင်သေးပေမဲ့သန်းနဲ့ချီပြီး ထိုးပြီးကြတဲ့အထဲ မှာမှ သူတယောက်သာ ဒီလို ဖြစ်ရတယ် ဆိုတော့ ..သူ့ ကံကြမ္မာ လို့ပဲဆိုရလေ မလားနော် ။
အချက်အလက်များကို ဒီနေရာများ ၁ ၊ ၂ တို့ မှ ရယူထားပါတယ် ။
မိတ်ဆွေ အပေါင်း တို့လည်း ဒီကင်ဆာဘေးမှ ကင်းဝေးနေနိုင်ကြပါစေ ။
:kiki : at 10/06/2009 05:00:00 PM
ညီမလေး said... | Tuesday, October 06, 2009 5:14:00 PM
ရောဂါဘယတွေကလည်း စုံမှစုံပဲနော် ... ဗဟုသုတရစေတဲ့ပိုစ့်အတွက် ကျေးဇူးပါမမကိရေ..
Khyl said... | Tuesday, October 06, 2009 5:27:00 PM
မမသီရိ said... | Tuesday, October 06, 2009 5:56:00 PM
ကိရေ မမလေ့လာဖူးတဲ့ တချို့စာတွေထဲမှာတော့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာက လိင်ဆက်ဆံဖော် အမျိုးသားတွေရဲ့ လိင်အင်္ဂါ မသန့်ရှင်းမှုကြောင့် ပို အဖြစ်များတယ် လို့ မှတ်သားမိတယ် ဥပမာ ဆီးသွားပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်လေ့မရှိသူမျိုးတွေ၊ မွတ်ဆလင်လူမျိုးတွေရဲ့ ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးစံတခု ဖြစ်တဲ့ လိင်အင်္ဂါ အရေးပြား ဖြတ်တောက်ခြင်း မရှိသူတွေရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော် အမျိုးသမီးတွေ မှာ ပို အဖြစ်များ တယ် လို့ မှတ်သား ဖူးတယ် ဒါကြောင့် အဲဒီ အမျိုးသမီး သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေ မှာ ရာခိုင်နှုန်း နည်းသတဲ့
မမ ဖတ်ဖူး မှတ်ဖူး တာလေး ၀င်ဆွေးနွေးတာပါ ကိ ရေ
ခု ကိပြောတဲ့ ဆေးတွေက အဲဒီ အခြေအနေမျိုး အတွက်ရော ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်မှုပေးသလား မသိဘူးနော်.. စပ်စုသွားတယ်..မမ ရဲ့ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းထဲက beneficiaries တွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေလို့ .. ဗဟုသုတ အနေနဲ့ မေးကြည့်တာနော်..
rose of sharon said... | Tuesday, October 06, 2009 6:05:00 PM
မသိသေးတာတွေ သိလိုက်ရတယ်... ကျေးဇူးပါရှင်
kiki said... | Tuesday, October 06, 2009 6:38:00 PM
မြတ်နိုး said... | Tuesday, October 06, 2009 7:04:00 PM
ဝက်ဝံလေး said... | Tuesday, October 06, 2009 7:11:00 PM
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ သားအိမ်ကင်ဆာ အဖြစ်များတယ်ထင်တယ် မကိရေ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က partner တွေ များတာကိုး
ဗဟုသုတ အတွက်ကျေးဇူးပါ မကိရေ
PS ၁ မရတာနာတယ် ကွာ ဟိဟိ
Yu Ya said... | Tuesday, October 06, 2009 7:20:00 PM
ဖွားကိရေ.. ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတွေ အများကြီး ရသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။
kyalkalay said... | Tuesday, October 06, 2009 7:56:00 PM
ကလေးများ အားလုံးလဲ စာတင်မဲ့ ဆရာဝန်မျှော်နေဆဲ
စိမ်း... said... | Tuesday, October 06, 2009 8:26:00 PM
thawzin said... | Tuesday, October 06, 2009 9:06:00 PM
Read more လုပ်ထားတာက အဲလိုဖြစ်အောင်ပဲ သီးသန့်လုပ်ထားတာလား မသိဘူး။ ခေါက်ထားသေးသဗျ မရောက်ခင် ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ ဆက်လက်ဖတ်မယ်ဆိုရော စာတွေက ရောသွားရော ပြန်စဖတ်ရရော... ဒါကြောင့် ခေါက်ထားသေးသဗျကို အရင်ကလစ်ပြီး ဖတ်ရတယ်ဗျာ..... အနောက်နိုင်ငံတွေ အဖြစ်များမယ်ထင်တယ်နော် ဒီနိုင်ငံတွေက အဲဒီကိစ္စက တော်တော်များများ ငယ်ငယ်အရွယ်မှာပဲ တွေ့ကြုံရတာဆိုတော့ အဖြစ်ပိုများမှာ ....မြန်မာပြည်လဲ အခုဆို သိပ်မဟန်တော့ဘူး အဲလိုယဉ်ကျေးမှုတွေများလာတော့ ရောဂါတွေလဲ များလာတော့မှာပဲ။ ဘာတွေပြောနေပါလိမ့် :? ဗဟုသုတ တစ်လုံးနှလုံးမှတ်သားသွားပါတယ် အလွတ်ကျက်မသွားတော့ တလုံး၂လုံးလောက်တော့ နားဝကြားဖူး ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်မရယ်
maylay said... | Tuesday, October 06, 2009 11:49:00 PM
မမကိရေ မေလေး ပြန်လာဖတ်ရတာ ပိုစ့်တင်တင်ချင်းသိတာတောင် သေချာဖတ်ချင်လို့ ပြန်လာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ မမ။ နောက်တခေါက်ထပ်ဖတ်ပါဦးမယ်။ မေလေးသိချင်တာတွေ ရှိသေးလို့ရှင်းအောင်ပါ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ မမ။
Anonymous said... | Wednesday, October 07, 2009 2:16:00 AM
မသိရသေးတာတွေ သိထားသင့်တာတွေ ဝေမျှပေးတာ
Moe Cho Thinn said... | Wednesday, October 07, 2009 11:52:00 AM
အခုလို ဗဟုသုတ ရစရာ ဖော်ပြပေးတာ ကျေးဇူးအထူး တင်စရာပါပဲ ကိကိရေ..ဖတ် မှတ်သွားပါတယ်။
တခြား ကင်ဆာများရော ဒီဆေးနဲ့ မပျောက်ဘူးလား။ သွားထိုးမလို့..ကြောက်လို့။
ahphyulay said... | Wednesday, October 07, 2009 6:32:00 PM
တိုးတက်နေတဲ့ နိူင်ငံတွေမှာ အစိုးရက မိဘလို
ပဲ နိူင်ငံသားတွေ အားလုံးကို ကျန်းမာရေးနဲ့ 
ပတ်သက်ပြီး အချိန်နဲ့ တပြည်းညီ မျက်ခြေမပြတ်
တန်း စောင့် ရှောက်နေတာတွေ့ ရလို့ ကြည်နူး
စရာပါ။ အလွယ်တကူမရနိူင်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ
တဲ့ မမကီ ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ခြေလှမ်းသစ် said... | Wednesday, October 07, 2009 8:06:00 PM
ဖွားကိရေ ယူအက်စ်မှာ ဒီရောဂါက အရမ်းဖြစ်တယ်ဗျ အခုလို ဗဟုသုတအဖြစ် ဖတ်လိုက်ရတာ ကျေးဇူးပါနော်
Angel Shaper said... | Thursday, October 08, 2009 8:19:00 AM
အားပါးးးးးးး လန့်လိုက်တာ ရောဂါကြီးတွေ။
Nge Naing said... | Thursday, October 08, 2009 2:47:00 PM
kiki ရေ ကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းဦးလေးကို လာဖတ်သွားပါတယ်။ Public Health in Myanmar မှာအဲဒီအကြောင်း နောက်တခါမေးခွန်းလာမေးရင် ဒီပို့စ်လေးကို ညွှန်းပေးလိုက်မယ်နော့်။
Anonymous said... | Friday, October 09, 2009 1:43:00 PM
အဲဒီရောဂါကာကွယ်ဆေးက မြန်မာပြည်မှာရောထိုးလို့ရပီလား မြန်မာပြည်မှာထိုးရင်ရော ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲ
အသည်းရောင်အသားဝါကာကွယ်ဆေးလို ၃။ ၄ ခါထိုးဖို့လိုလား
ပြည်ပမှာထိုး၇င်ရော ဘယ်လောက် ပေးရလဲဆေးတစ်ချောင်းကို
kiki said... | Friday, October 09, 2009 7:21:00 PM
ဒါတွေ ကို ပို့ စ်ထဲမှာ ရေးပြထားပြီးသားပါ ။ Read more ခေါက်ထားတဲ့အထဲ မှာ ဖွင့်မကြည့် ဘူးနဲ့တူပါတယ် Anonymous ရေ ..
-အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၂၆ နှစ် အရွယ် အတွင်းထိုးထားရင် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှု ရ ပါတယ် .
-ဆေး ပတ်လည်အောင်ဆိုရင် ၃ လုံး ထိုးရ ပါမယ်
ပထမ ၁ လုံး ထို့း ပြီး ၂ လကြာရင် ဒုတိယ အလုံးထိုး .. နောက်ထပ် ၄ လ ခြားပြီး တတိယ အလုံး ကို ထိုး ရမှာပါ
ဒါကြောင့် ၆ လ အတွင်း ၃ လုံး ထိုးရမယ်ပေါ့ ။
-ဈေးကတော့ ၁ လုံး ကို US $ 110 လောက်ကျပါတယ်
- မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရနိုင် ပြီလားဆိုတာ ကတော့ သေချာ မသိပါဘူး ။( ချွင်းချက်တွေ ကတော့ ရှိမှာပေါ့ ..း) ဆေးအရောင်းဆိုင်တွေ မှာ ကိုယ့်ဟာ ကိုယ် စုံစမ်းကြည့်ပါ .
ကိုလူထွေး said... | Saturday, October 10, 2009 7:33:00 PM
Unknown said... | Friday, December 18, 2015 1:18:00 PM
တစ်​ခု​လောက်​​မေးချင်​ပါတယ်​ဆရာ ကျမအမျိုးသားနဲ့ လိင်​ဆက်​ဆံပြီး၇င်​ အနံ့ဆိုးထွက်​ပါတယ်​ ​တော်​​တော်​ ဆိုးတဲ့အနံ့ပါပဲ မိန်​မကိုယ်​အတွင်းကို လက်​နဲ့နှိုက်​ကြည့်​​တော့ အဖြူဖတ်​လို ၀ါညစ်​ညစ်​အနှစ်​​တွေ​တွေ့ရတယ်​ အတွင်းထည်းအထိ​ဆေးလို့လဲမ၇ဘူး အဲ့တာေ၇ာဂါ လက်​ခဏာလားသိချင်​ပျါယ်​ ပြီး​တော့ ဘယ်​လို​ဆေး​တွေ​သောက်​၇မလဲသိချင်​ပါတယ်​....​ကျေးဇူးပြုပြီး​ဖြေကြား​ပေးပါ ဘာ​ကြောင့်​ဖြစ်​၇တာလဲသိချင်​ပါတယ်ေ၇ာ
နာတာလေးတော့ ခွင့်ပြုကွယ် ...
သေအတူ ရှင်မကွာ ၊ သေရွာထိပါ မခွဲဘူး ...
ကုရာနတ္တိ ဆေးမရှိပြီ (၁) ..
E ခေတ်ထဲမှ ၊ E လျှောက်လွှာ
တိမ်ပြာပြာနေ့ တနေ့ ဆန်းဒေး မှာ ကွယ် ...
Seafood ကြိုက်သူများသို့...
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲရှိတယ် ..
နေရာတကာ ပါတဲ့E .....
ပညာကိုယ်စီ ရှာကြမယ် ...
မြန်မာစကားသည် ဒို့ စကား...
E ယဉ်ကျေးမှု ...
အင်္ဂလိပ် စာလုံးအစ ၊ ဘာတွေတုန်းဗျ
ငိုတိုင်း ရမယ် မှတ်နေလား ။
အဆိုအမိန့်Vs မဆိုမမိန့် 
ကပ်ခွာ နဲ့ဘဲဥ
ကျွတ်ရပြန်ပြီပေါ့ ၊ ဒီတနှစ်...